Ichi chishandiso hachishande zvakanaka neLinux - ndeapi matanda andinofanira kutarisa? | Kubva kuLinux
Ichi chishandiso hachishande zvakanaka neLinux - ndeapi matanda andinofanira kutarisa?
En Linux la mharaunda anogara aripo kuti akubatsire. Kugoverwa kwega kwega kune maforamu, wikis, IRC chiteshi, nezvimwe. mauchazogara uchikwanisa kuwana ruoko rwekubatsira, zvisinei, pane dambudziko rapfuura: ndeapi matanda (zvinyorwa) Ndinofanira kugovana uye chii mashoko ndinofanira kuratidza saka unogona kundibatsira?
Kutanga, zvakakosha kutaura kuti ruzivo rwakanyanya kukosha iwe rwaunoda kugovera nderwe:
1.- Izvo iwe zvawangoita zvese zvinhu zvisati zvatadza.
2.- Zvawaitarisira kuti zviitike. Ndiri kureva, zvese zvaifanira kunge zvakashanda sei kuti ndikwanise kutaura kuti zvakafamba "zvakanaka."
3.- Ruzivo rwe zvakanyatsoitika.
Saka, semuenzaniso, heino mimwe mienzaniso yekubvunza iyi mhando yemibvunzo nenzira kwayo:
Ini ndakaisa Ubuntu 10.04 (x86 vhezheni) pane yangu Dell Opti cheroever 312 laptop. Pandinopinda, kadhi yangu yeWi-Fi network haina kuonekwa neNetwork Manager saka hairatidze netiweki dzeWi-Fi, kunyangwe iyo wired network kubatana ichishanda zvakanaka ..
Ini ndinoshandisa Ubuntu 10.04 Netbook edition pane yangu System76 laptop. Pandinobaya mahedhifoni, ruzha runobuda kuburikidza navo asiwo kuburikidza nemaspika.
Ndiri kushandisa Ubuntu 10.04. Ini ndaishandisa chirongwa kuisa iyo Yakavanzika Madhiraivha eangu nvidia GeForce FX 5200. Iye zvino pandinotangazve muchina iyo system yakaturika uye inoratidza dema skrini mushure mekuratidzira iyo Ubuntu splash skrini.
Zvakanaka, tatoona mimwe mienzaniso yekuti ungatsanangure sei dambudziko rako. Nekudaro, kana uchibata nezvinetso zvehardware, zvingangoita kuti ndiwo matambudziko chaiwo emuchina wako uye avo vanoedza kukubatsira havagone kudzokorora dambudziko nekuti havana Hardware yakafanana. Nechikonzero ichocho, i "tsika ine hutano" kusanganisira mamwe matanda (matanda kana marejista) ehurongwa anogona kupa akawanda maturusi kune avo vanoedza kukubatsira.
2 Vhidhiyo kadhi matambudziko
3 Audio kadhi matambudziko
sudo lspci -nn inonyora zvese zvakaonekwa zvePCI zvishandiso. Izvi zvinosanganisira makadhi ese ekuwedzera (vhidhiyo makadhi, wifi, nezvimwewo) zvine mushini wako, zvisinei nekuti kernel ine mutyairi akakodzera kuyanana navo. Ruzivo urwu runonyanya kubatsira, kunyanya mune kesi paunenge usiri 100% chokwadi icho Hardware muchina wako unacho.
lasyb Nyora zvese zvishandiso zveUSD zvakabatana nemuchina wako. Zvekare, urwu ruzivo runobatsira mune kesi iwe paunenge usiri 100% chokwadi icho hardware muchina wako une. Iyo inoshandawo kuongorora kuti chishandiso chakabatana nenzira kwayo kana kuti hachisi chinetso chehardware (chakatsva, nezvimwewo).
/ var / log / udev y / var / log / dmesg iwo ane ruzivo nezve zvese zvishandiso zvakaonekwa nekernel. Aya mafaera erogi kazhinji akakura kwazvo. Kunze kwekunge iwe uchiziva kuti chikamu chakadii icho chinoshanda, zviri nyore kuti uzvisanganise sema link uye kwete kuzvinamatira sechikamu chemubvunzo wako.
Vhidhiyo kadhi matambudziko
/var/log/Xorg.0.log Iyo irogi regiyo yeiyo X server (iyo inobata zvese mifananidzo muLinux). Inoshanda mune zvese zviitiko paunenge uine matambudziko nekadhi revhidhiyo.
LIBGL_DEBUG = verbose glxinfo inoratidza ruzivo rwekuti muchina wako unotsigira 3D grafiti kumhanyisa, izvo zvinobatsira mumamiriro ezvinhu iri iri dambudziko (semuenzaniso, matambudziko nekubatana uye zvimwe zvirongwa zvinoda 3D giraidhi yekumhanyisa).
lspci -nn | grep vga inoratidza rondedzero yemakadhi evhidhiyo akaonekwa. Izvi zvinowanzo shanda mumamiriro ezvinhu iwe paunenge usina chokwadi kuti ndeipi kadhi rauinaro.
xrandr inoratidza rondedzero yeanowanikwa screen resolution yezvakaonekwa zvishandiso. Sarudzo yakatarwa ne "+" chiratidzo inokurudzirwa, nepo iyo ine asterisk ndiyo yatiri kushandisa. Ruzivo urwu runowanzobatsira kana uchiedza kubatanidza inopfuura 1 yekutarisa.
Audio kadhi matambudziko
/ proc / asound / makadhi inonyora zvese zvakawanikwa odhiyo zvigadzirwa. Izvo zvinogara zvichibatsira kuisa iyi log faira.
/ proc / asound / kadhi0 / codec # 0 ine ruzivo nezve yekutanga kadhi rezwi, kusanganisira ruzivo nezve yekuisa / yekubuditsa madoko. Kana dambudziko rako riine chekuita nekubatanidza mudziyo usina kunyatsoonekwa kana usiri kushanda nemazvo, unofanirwa kuisa iyi faira regi. Kana iwe uine anopfuura rimwe chete kadhi rezwi rakaiswa, pachave neanopfuura rimwe dhairekitori / proc / asound / kadhi ???.
Chekupedzisira, usati watenga chero muchina, mudziyo kana peripheral, zvinogara zvichikurudzirwa kuti uone iyo Hardware inoenderana zvinyorwa yakaitwa nevashandisi nemakambani anovandudza iyo distro yaunoda kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ichi chishandiso hachishande zvakanaka neLinux - ndeapi matanda andinofanira kutarisa?
Mhoroi, Kubva kunaLinux shamwari, yakaiswa munguva pfupi yapfuura; archlinux pane pendrive yeiyi toshiba satellite c845 laptop uye pakutanga, zvese zvakanaka, kudzamara ndisinganzwisise kuti sei, asi kuisirwa paUSB (bhutsu muEFI modhi uye KUSVIRA BOTI inogonesa), yakamira kuzivikanwa neEFI uye kubva ipapo, handichakwanise kuti itange zvakare. Rimwe dambudziko nderekuti touchpad haina kushanda. asi ndiri kuyedza nezvakagoverwa: (bhutsu muEFI regedza maitiro) ubuntu, Fedora, Debian uye iyo touchpad haishande zvakadaro. Ini handikonzere matambudziko neizvi, zvakaringana kwandiri kuti ndiwedzere mbeva uye ndapedza chidzidzo; asi pasina kupokana, zvingave zvinokurudzirwa kuita kuti ichi chishandiso (chekubata-padhi) chishande.
Zvakanakisa, uye pasina kupokana kuti chinyorwa ichi chinofanirwa kutariswa neavo vanoda rubatsiro neGNU-Linux.
Mhoro! Pamwe iwe unogona kuwana mhinduro mune imwe yeanotevera maratidziro:
Mumamiriro ezvinhu akadai, ndinokurudzira kuti utsvage iro kiyi mune yedu yekutsvaga injini (ona kumusoro kurudyi). Mumakore ano isu takanyora zviuru zvezvinyorwa uye pamwe zvimwe zvacho zvinogona kukuunzira mhinduro kudambudziko rako.
Ini ndinoda ArchLinux asi ...
Kuisa log: Archlinux